धरान १६ मा पनि सुरु भयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम - Everest Daily News
धरान १६ मा पनि सुरु भयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
धरान । धरानको वडा नं. १६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ ।
आईतबार धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राई, वडाध्यक्ष दिल कुमार गिरी र सामान्य प्रशासन शाखाका वरिष्ठ अधिकृत गणेश प्रसाद खतिवडा सहितको टोलीले वडा नं. १६ स्थित रहेको तत्कालिन धरान उपमहानगर प्रमुख स्व. तारा सुब्बा स्मृति पार्कमा पुगेर रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत छनौट भएका रोजगारदातालाई आवश्यक पर्ने औजार सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेको हो । स्मृति पार्कमा खटिएका ६ जना मजदुरहरुलाई परिचय पत्र, सुरक्षात्मक टोपी, एप्रोन, बेल्चा, गैति नगरपालिका र वडा कार्यालयले सहकार्य गरेर औजार सामाग्री प्रदान गरिएको छ । थप आवश्यक औजार सामाग्रीहरु उपमहानगरपालिकाले सोमबार उपलब्ध गराउने बताएको छ ।
नगर प्रमुख राईले धरानमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत १६ नं. वडामा ६ जनाले काम पाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्मृति पार्कमा खाल्डाहरु खन्ने, वृक्षारोपण गर्ने र सरसफाई गर्ने भनेर उपमहानगरपालिकाबाट योजना स्वीकृत भएको थियो । रोजगारदाताले योजना स्वीकृत भए बमोजिम काम गर्न आईतबारबाट नै सुरु गरेको छ । रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत काम पाएका मजदुरहरुले स्मृति पार्कमा खाल्डा खन्ने, झाडी फाड्ने र वृक्षारोपन कार्य गर्नेछन् । काम नपाएर बेरोजगार भएर बसेकाको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले ठूलो सहयोग पुर्याएको नगर प्रमुख राईले बताउनुभयो ।
धरानमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत यस वर्ष १ सय ५७ जनाका लागि एक सय दिनको रोजगारी दिने भनेर बजेट प्राप्त भएको सामान्य महाशाखाका बरिष्ठ अधिकृत गणेश प्रसाद खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । एक जना रोजगारदाता बराबर ५ सय १७ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछ ।
‘सार्वजनिक स्थल र सवारी साधनमा महिलालाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गरौं’- मेयर राई
स्कुल अफ डेमोक्रेसी नेपाल सुनसरीको पदस्थापन सम्पन्न